နေ့တစ်နေ့ကို စတင်ရန် သက်ကြီးပိုင်းအတွက် မနက်စာ | Ensure
နေ့တစ်နေ့ကို စတင်ရန် သက်ကြီးပိုင်းအတွက် မနက်စာ
နေ့တစ်နေ့လုံးအတွက် အရေးအကြီးဆုံး အစားအသောက်မှာ မနက်စာဖြစ်ပြီး ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းအတွက် အကြောင်းအရင်းကောင်း တစ်ရပ်ရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင်မနက်စာကို မစားခဲ့လျှင် ဆယ်ဆ ဗိုက်ဆာနိုင်ပြီး နောက်တစ်နပ်တွင် များစွာ စားမိနိုင်သည်။ မတူညီသော ဝိတ်လျှော့စနစ်တွင် ကျန်းမာသော ဘဝအတွက် တူညီသော အရာမှာ မနက်စာဖြစ်သည်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အစားနည်းသော သက်ကြီးပိုင်းများတွင် မနက်စာသည် တစ်နေ့တာအတွက် ကယ်လိုရီ၊ အာဟာရဓာတ်နှင့် သတ္တုဓာတ်များ လုံလောက်စေရန် ကူညီပေးသည်။
ကျန်းမာသော မနက်စာသည် သင့်စွမ်းအင်ပမာဏနှင့် အာရုံစူးစိုက်မှုကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင်မနက်စာမစားလျှင် ဗိုက်ဆာခြင်းအပေါ်တွင်သာ အာရုံစိုက်မိနိုင်ပြီး ပိုမိုစားမိစေနိုင်သည်။ နောက်တစ်ချက်မှာ ညအခါတွင် သင့်ခန္ဓာကိုယ် အနားယူပြီး မနက်ခင်းတွင် ဇီဝရုပ်ဖြစ်ပျက်မှုအတွက် အာဟာရဓာတ်လိုအပ်သည်။ မနက်စာကို ရထားအင်ဂျင်အတွက် ထင်းထည့်သလို တွေးကြည့်ပါ။ အအေးအတိုင်းသွားလျှင် ပူလာရန် ကြာမြင့်သည်။ သက်ကြီးပိုင်းများတွင် နှေးကွေးသော ဇီဝရုပ်ဖြစ်ပျက်ခြင်းရှိနေခြင်းကြောင့် မနက်စာမစားလျှင် ၎င်းတို့၏ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ မနက်စာသည် သက်ကြီးပိုင်းများအား ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းထားပေးခြင်း၊ ကျန်းမာရေးကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်း၊ ဆာလောင်မှုကို လျှော့ချပေးခြင်းနှင့် အာရုံစူးစိုက်မှုအားကောင်းမွန်စေသည်။ သက်ကြီးတစ်ဦးအနေနှင့် မနက်ခင်းဆေးသောက်ရလျှင် အဆိုပါဆေးများသည် ပြည့်ဝသော အစာအိမ်အားလိုအပ်သောကြောင့် မနက်စာက ကူညီဖြေရှင်းပေးပါတယ်။
ကစီဓာတ်၊ သစ်သီး၊ ပရိုတင်းနှင့် နို့နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်း တစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခု မျှတစွာပါဝင်သည့် မနက်စာတွင် ခန့်မှန်းချေ ကယ်လိုရီ ၄၀၀ မှ ၅၀၀ အတွင်းပါဝင်သည်။ အနောက်တိုင်း မနက်စာကို ပိုကြိုက်လျှင် အဆီနည်းသောနို့၊ ထမင်းကြွပ် သို့မဟုတ် ကောက်နှံစုံ စီရီရယ်လ်ကို စားပါ။ နို့မသောက်ချင်လျှင် ပန်းသီးစိတ်အနည်းငယ်နှင့် မြေပဲထောပတ်တစ်ပွဲကို တို့စားပါ။ ပေါင်မုန့်မီးကင်ကြိုက်လား? ဒါဆိုရင် ပေါင်မုန့်မီးကင်နည်းနည်းကို ထောပတ်မပါပဲ သဘာဝ သစ်သီးနှင့် ဒိန်ချဉ်လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်တို့နှင့် သုတ်စားပါ။ ဥစားချင်လျှင် စားနိုင်သည်။ သို့သော် ပေါင်မုန့်လိပ် သို့မဟုတ် လိမ္မော်သီးတို့နှင့် စားပါ။ အချိန်မရှိဘူးလား? မနေ့ညမှ အကျန်၊ စီရီရယ်များကို ပြင်ဆင် အပူပေးပြီး၊ အစားအသောက် ဖြည့်စွက်စာဖြစ်သည့် အချိုရည်များနှင့် တွဲစားပါ။ ရွေးချယ်ရခက်ခဲလျှင် သို့မဟုတ် အကူအညီလိုအပ်လျှင် Ensure Gold ကို သင့်အစားအသောက်တွင် ထည့်စားပါ။ ပရိုတင်း၊ +HMB နှင့် ဗီတာမင် D3ဆ၊ Omega-3 နှင့် အခြားအာဟာရဓာတ်နှင့် သတ္တုဓာတ်များ ၂၈ မျိုးပါဝင်တဲ့ Ensrue Gold ကို တစ်ရက်လျှင် ၂ ခွက်သောက်သုံးပါ သို့မဟုတ် မနက်စာကို တစ်ခွက်သောက်ပါ။ ထိုသို့လျှင် သင့်နေ့ရက်ကို စတင်ဖို့ အာဟာရပြည့်ဝသော မနက်စာကို ပေးစွမ်းပါလိမ့်မယ်။